Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Kg oo ka qeyb galey Munasabad lagu dhiiragalinayey qaar kamid ah ururada Bulshada magaalada Baydhabo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Kg oo ka qeyb galey Munasabad lagu dhiiragalinayey qaar kamid ah ururada Bulshada magaalada Baydhabo.
written by Siid Cali 23/07/2020
Kulan ay si wada jir ah ay u soo qaban qabiyeen maamulada gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ayaa waxaa lagu qabtey hool weyn oo ku dhaxyaala madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya.
Kulankaani ayaa waxaa ka soo qeyb galey Gudoomiyaha golaha baarlamaanka kg ahna kusimaha madaxweynaha Cali Siciid Faqi, xilidhibaano, wasiiro, maamulada gobolka baay kan degmada baydhabo, odiyaasha dhaqanka koonfur galbeed ururada dhalinyarada fanaaniinta kooxda janaawkey iyo bulshada ra`idka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay.
Muhiimada kulankaani ayaa waxaa uu ahaa sidii loo dhiira galin lahaa ururada bulshada ee degmada baydhabo oo kaalin weyn ay ka soo qateen hormarinta degmada baydhabo iyo labadii munasabadood ee la soo dhaafey oo ay kala ahayeen 26 Jun iyo 1, aad luulyo oo si weyn loogu xusey degaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo.
Gudoomiyaha gobolka baay Cali Wardheere Cabdiraxmaan Dooyow iyo gudoomiyaha degmada baydhabo Xasan Macalin Axmed `Biikoole` oo ugu horeyntii kulankaan kahadleen ayaa waxey ku dheradeen kaalinta hormarinta ururada iyo dhalinyarada degmada baydhabo ay ku leeyihiin, Waxeyna sidoo kale ay tilmaameen in sifiican ay ugu qeyb qateen wacyi-galinta iyo faafitaanka cudurka covid 19 iyagoo bulshada farayeen sidii ay ugu fogaan lahayeen goobaha laga qaadi karo cudurkaasi.
Wasiirka wasaarada arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed Mudane Maxamed Abuukar oo kalankaan ka hadley ayaa sheegey iyo ururada kala duwan iyo dhalinyarada degmada baydhabo ay u qalmaan in meesha ugu yar layiraado waad mahadsantihiin waana lagu dhiira galiyo in lagudoonsiyo shahaado sharaf.
Ugu dambeytii kulanka oo soo xirey Gudoomiyaha golaha baarlamaanka kg ahna kusimaha madaxweynaha Cali Siciid Faqi ayaa wuxuu ku dheraadey in shacabka ku nool degaanadaan koonfur galbeed ay yihiin dad jeceyl hormar iyo wanaaga sidooda kalena dhuulkooda uu yahay mid hodan ah, wuxuuna ugu baaqey iney ka shaqeyaan nabada iyo in ay ka fa`ideystaan barwaaqada alle ku maneystey.
Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Kg oo ka qeyb galey Munasabad lagu dhiiragalinayey qaar kamid ah ururada Bulshada magaalada Baydhabo. was last modified: July 23rd, 2020 by Siid Cali
Dhageyso:Waraysi xasaasi ah oo aanu layeelanay isaaq tiiraw Ku Qabatey Xuska Maalinta TB-da Adduunka magaalada baydhabo ee xaruunta gobalka bay,,
R.W Cumar oo ka hadlay Dhalinyarada ku xiran Hindiya
DHAGEYSO:Dowlada Koonfur Galbeed Oo Amaro Kusoo Rudey Musharxiinta Kala Duwan Ee Soo Garaya Magalada Baydhabo In Amaanka Magalada Aysan Qalqal Gilinin